WOWOW Kutsiva Sprayer Musoro weKicheni Faucet YeG1 / 2 Male Kontakti
musha / zvishongedzo / Faucet accessories / WOWOW Kutsiva Sprayer Musoro WeKicheni Faucet YeG1 / 2 Male Chibatanidza
Spray sarudzo - ino kicheni singi pombi inodhonza uye udonhedze pasi pfapfaidzo yemusoro hunhu yakafara uye kuyerera sarudzo yespray.
Kuunza yakangwara kupuruzira, mutsva universal kudhiraina kutsiva nzvimbo initsiura H5003 yakagadzirirwa kuisa zvirinyore mune yako yazvino kicheni faucet. Iyo inoratidzika inonaka ergonomic dhizaina maviri-kuchengetedza mvura 1.5 gpm squirt dzimwe nzira dzakapamhama uye dzinoyerera mafashama.
Cherekedza usati watenga: ino kicheni faucet musoro kutsiva ndeye g1 / 2 yekubatanidza (yechirume) (ingangoita 2 cm kana 0.8 inches), isiri npt, kwete universal High mhando: kicheni kupuruzira musoro yakavakirwa kubva kuinjiniya-giredhi repurasitiki (abs) uye zvakare neoperl aerator yakaunganidzwa, inogona kushandiswa kwenguva yakareba kwazvo panguva yekushandiswa kwemazuva ese, iyo bramm nickel yekupedzisa ndeyekurwisa-ngura isina zvigunwe kugara.
3 chinangwa chimiro: inoenderera inoyerera mvura inopa kumeso & nyoro kuyerera, hapana kupaza; pfapfaidzo mvura inogona kusuka michero kana miriwo ine hunyoro, anti-splatter rukova isina kukuvara; aqua blade mvura maitiro / kutsvaira blade maitiro anogona kutsvaira singi yako nyore uye nekukurumidza nesimba rine simba.
Zvirinyore kuchenesa: yakakwirira mhando abs aerator inogona kunge isina kunyatso kujekerwa nemari, isina kuoma mvura uye chiyero, inochengeta iyo nemvura uye nehupenyu zvichiramba.
Kuvimbiswa, basa revatengi: 2-gore rekuvimbisa uye basa revatengi rinowanikwa. Yakabatanidzwa neiyo 90-day complimentary Return.
SKU: H5003 Categories: zvishongedzo, Faucet accessories Tags: Bronze Nickel, Mwaya kamwene, Sprayer Hosi, Simbi isina ngura